Ininzi yeengoma zeBeatles, njengengoma ezininzi zepop, zithetha ngothando. Kodwa njengoko umculo weqela uphuhlisiwe, ngoko isihloko sabo sagqitha ngaphaya ko "Uyakuthanda, ewe," kwaye "Ndifuna ukubamba isandla sakho." Ezinye zeengoma zazo ezigqwesileyo zibonisa, zibonisa, okanye zidibanise ngeengcamango ezingakumbi
Andikwazi ukuthenga I-Love
"Awukwazi ukuthenga I-Love yintetho yeklasi yenkcazo yemveli yefilosofi kwizinto eziphathekayo eziqhathaniswa nokulungileyo kumphefumlo. Kuyinyaniso ukuba uSocrates wayekhathalele ngakumbi inyaniso kunye nobuhle kunokuba" uthando "(njengoko lukhulelwe Ingoma ingenakwenzeka nje ngePlatonic kuphela) kwaye kulungile ukuba uqaphele ukuba uPawulos kamva wathi "bafuna ukungazithengi uthando" banikezwa ngamava kunye nodumo. kuninzi ngemali, imali ayikwazi ukungithenga uthando, iya kuvunyelwa ngabafilosofi abaninzi ukusuka kumaxesha amandulo ukuya kutsho namhlanje.
Ubusuku bobusuku obunzima
UKarl Marx wayeyithanda "Ubusuku Bokukhuni." Ukubhala ngokuphathelele "umsebenzi ohlukeneyo," uMarx uchaza indlela umqeshwa kuphela ngayo xa esekhaya. Xa esebenza emsebenzini akayena ngokwakhe, uncitshiswe kuye kwinqanaba lesilwanyana unyanzelekile ukuba enze nantoni na into ayitshilo. I-"owowwwwww "emkhatsini wengoma ingaba isandi sokuzonwabisa xa sithandana nomntu othandekayo okanye ukubethelwa kwesilwanyana esivela kumntu onomhla" usebenza njengenja. "
"Akukho Mntu" inkcazo yeklasi yomntu okhupha ngaphandle kweenjongo kunye nokuchithwa kwihlabathi lanamhlanje. U-Nietzsche wacinga ukuba impendulo efanelekileyo ekulahlekelweni kwentsingiselo elandelayo "ukufa kukaThixo" yayiya kuba yinto yokwesaba. Kodwa "iNdawo engekho ndawo" ibonakala ngathi ilukhuni.
Uluntu lwangoku ubuxhakaxhaka banamhlanje lubonakaliswa ngumntu ngamnye. kunye nokuzikhethela ngabanye, kubangelwa ukuba yedwa kwaye ibe yedwa. Ingoma kaMcCartney ithatha ngokunyanisekileyo uluntu lomfazi obingqina abanye abantu abatshatileyo kodwa ehlala ekupheleni komphefumlo wakhe ngokwakhe, ngoko ke engenabomi ukuba akukho mntu emngcwabeni wakhe. "I-Eleanor Rigby" ibangela umbuzo: "Bonke abantu abasesebenzi, bavela phi?" Uninzi lwama-theorists enzentlalo luza kuthi ziveliswe yinkqubo echaphazelekayo ngokukhuphisana kunye nentengiso ngaphandle koluntu.
'Uncedo' kukubonakalisa intliziyo engenakunqwenela ukungaqiniseki komntu owenza utshintsho kwi-intembelelo engabonakaliyo yolutsha ukuba aqonde ngokunyanisekileyo nangabantu abadala ukuba ufuna kangakanani abanye. Apho 'i-Eleanor Rigby' ibuhlungu, "Uncedo" lusizi. Ngezantsi, liyingoma malunga nokuziwayo kunye nokuchithwa kwezigwenxa.
NgoNcedo oluncinci kubahlobo bam
Le ngoma iphela ekupheleni kwebala lo "Uncediso." Ngomculo omnandi, "NgoNcedo oluncinci kubahlobo bam" libonisa ukhuseleko lomntu onomhlobo. Akavumi ngathi njengomntu onetalente ephakamileyo okanye enomdla; ukuba nabahlobo ukuba "bafumane" kunye ngokwaneleyo. Umfilosofi wasendulo ongumGrike uEpicurus uya kuvuma. Uthi akukho nto imfuneko ukuba unonwabo, kodwa ezo zinto ziyimfuneko, ebaluleke kakhulu kukude kuba ngumhlobo.
"Ebomini Bwan" ingoma efihlakeleyo, enye yeyona ndlela inkulu kaJohn Lennon. Kuthe malunga nokufuna ukubamba izibini zombini ngexesha elifanayo, nangona ziphikisana. Ufuna ukubambelela ekukhunjweni kwakhe okudlulileyo kwexesha elidlulileyo, kodwa naye ufuna ukuhlala apha kwaye anganamatheli kwiimemori zakhe okanye azibophe ngazo. Njengoko 'Usizo' lukwabonakalisa kwinkqubo yokuhamba ngaphaya kolutsha.
"Izolo," enye yeengoma ezidumileyo zikaPawulos, inika umdla othakazelisayo kunye noBomi bam. Apha umculi ukhetha okudlulayo kwikhoyo - "Ndiyakholwa izolo" - kwaye ivalwe ngokupheleleyo ngaphakathi kwayo ngaphandle komnqweno wokuza kuhambelana nanjengoku. Ngenye yeengoma ezigqityiweyo eziye zabhalwa, ngeenguqu ezingaphezu kwezi-2,000 ezirekhodwe. Kuthetha ntoni malunga nenkcubeko yangoku?
"Hey Jude" udlulisela ubungqina obuvuyayo, obunomdla, obungabonakaliyo ngobomi. Ihlabathi liya kuvela kwindawo efudumele kumntu onentliziyo efudumele, ngelixa "isidenge esidlala ngokuphoyisa, ngokwenza eli hlabathi libe lincinci." Kwakhona kusitsho, ngendlela ethobekileyo, ukuba "siphile ngengozi," njengoko u-Nietzsche ebeka kwi -Gay Science. Ezinye ifilosofi zithi indlela engcono yokuphila kukuzibonelela ngokukhuselekileyo ngokuchasene nentlungu okanye ubunzima. Kodwa uYuda uxelelwa ukuba abe nesibindi, kwaye mvumele umculo nomthando phantsi kwesikhumba, kuba yindlela yokufumana ihlabathi ngokubanzi.
"Makube" ngumculo wokwamkelwa, nokuba ushiye phantsi. Isi simo sengqondo esicatshulwayo sisinye isazi sefilosofi esasiphakanyiswa njengendlela eqinisekileyo yokwaneliseka. Musa ukulwa nomhlaba: zivumelanise nawe. Ukuba awukwazi ukufumana oko ufuna, funani oko unokufumana.
Ibhuloho lam lihamba
Yintoni i-Reach School kwi-College Admissions?
Isangqa Iimpawu - Zithini?